Reflections nke a Trader na World of Ebuka - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeForex SchoolReflections nke a Trader na World of Ebuka
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Forex School 0
Top Expert etozu December 2019 - Best Forex EA si - FX ígwè ọrụ
Nyochaghachi FX asaa Pips EA
FX asaa Pips EA
Ahịa: $ 129 (2 REAL & 2 ngosi akaụntụ, FREE mmelite & Nkwado)
Otu uzo eji eme ego: USDCAD
Mara: Enwere ngwugwu 3 dị iche iche nke FX Seven Pips Advisor Advisor dị ugbu a:
Ihe mbụ m hụrụ n'ahịa bịara dịka nwatakịrị 10 nke na-aga n'ụlọ ọrụ nna m na Dayton, Ohio, dịka 1940. Mgbe anyị risịrị nri ehihie na osisi ya, anyị ga-aga na ụlọ ọrụ ụlọ ahịa ya. Enwere m ike icheta isi nke sịga sịga site n'aka ndị okenye ndị nọdụrụ ala ma na-ele ahịa ahịa na Western Union teepu akọrọ, kwadoro na ihuenyo n'elu igwe. E nwere ihe nkedo osisi, nke na-abụkarị nwa agbọghọ mara mma, onye ga-agụ teepu ahụ ma jiri ọnụahịa ebubo na osisi. Mgbe ụfọdụ mgbe ngwaahịa ma ọ bụ nkezi ga-eme elu dị elu, a ga-enwe obi ụtọ. N'ụbọchị mgbe anụ ọhịa ahụ na-agba ahịa n'ahịa ahụ, e nwere ọtụtụ oche, ndị nọ n'ebe ahụ nọ jụụ ma na-agba ụra. O yiri ka anwụrụ sịga na-abawanye n'ụbọchị n'ụbọchị a na-ere ahịa ahụ.
Azụmahịa ahịa emeela ọtụtụ afọ. The Exchange Stock Exchange na-amalite mgbọrọgwụ ya gaa na 1792 mgbe otu ndị ọchụnta ego bịanyere aka na "Buttonwood Agreement" na ahia ahia na ntọala ọrụ. A nabatara 1867 nke mbụ ngwaahịa akọrọ. Oge kọmputa na jikọọ na ịntanetị na-eme ka ọ nwee ike ịzụ ahịa n'oge ọ bụla site na ebe ọ bụla n'ụwa. Anyị abịawo ogologo oge.
Ná ngwụsị afọ 1990, mgbe a ntụpọ-com afụ na-inflating, ụbọchị trading ghọọ nke na-ewu ewu. Na a oké ehi ahịa dị onye ọ bụla a amamihe. Ọ nwere ike ịdị mfe ego dị ka ogologo dị na ahịa anọgide na-agbago, ma otu ugboro ahịa akwụsị na-aga na one direction e nwere nnukwu nsogbu. Ahịa-emebiga ihe ókè, kwa elu na ala nke ukwuu. Novice investors na-enwekarị mbubreyo mbata maka oké ehi na ngwaahịa na-agbaba, chọpụtara na ahịa ogologo mgbe mmalite nke a big rally. Mgbe ebuka bụ ala, na ọtụtụ ndị na-eleghara ha. Nanị mgbe ngwaahịa ahịa rigowo ka nkezi ọhụrụ ọṅụ ghọọ mmasị. Site na mgbe gị akpụ isi, gị ore mmanya, gị na nne gị na-iwu nile nwere ngwaahịa Atụmatụ maka ị, ọ bụ ihe ịrịba ama na ihe nwere ahịa esesịn nwere nnukwu ọsọ elu. N'ikpeazụ, mgbe ị na-ezute ndị na nyere ha ọrụ ka ụbọchị ahia, nke a bụ a mara ezigbo mma ịrịba ama na afụ bụ banyere na da.
Nke a abụghị ịsị na ịnweghị ike ịme ego na ebuka. I nwere ike. Ọ bụrụ na ịzụlite ihe ọmụma, nkà nyocha, na azụmahịa acumen, ọ dịghị ihe kpatara na mmadụ enweghị ike ịbụ onye na-enwe ihe ịga nke ọma. Otú ọ dị, ọganihu dị mfe karị mgbe ị na-eme ihe ị chọrọ ime. Ọ bụrụ na ịzụlite nkà na ihe ọmụma iji nyochaa mgbagwoju anya nke ahịa, ebuka, ma ọ bụ ego, nke a ga-enyere gị aka karịa oge.
N'ihi na ndị na ina-ara ka equities ahịa, na-amalite na-eche banyere a ọrụ dị ka a ngwaahịa ore, ebe a bụ a okwu ndụmọdụ. A ngwaahịa ore na a na ngwaahịa ozu ahia dị iche iche ndị mmadụ dị iche iche na àgwà, nkà, na mmadụ. Kasị ngwaahịa na Broka bụ ere na-amụmụ ọnụ ọchị na ọsịsọ, peddling na investments họrọ management. E nwere ike mgbe-enwe a ogu nke mmasị n'etiti ezi ihe maka ụlọ ọrụ na ndị ahịa. The underwriting ngalaba nwere ike negotiated na nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa ndị e mere iji nweta ego maka ụlọ ọrụ. The Broka (ere)-enweta na-emesapụ aka na-akwụ ere ihe a maara dị a iseokwu ọzọ na-investors. Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ na-esite na ngwaahịa nwere ụfọdụ ihe isi ike ego. Ọ bụ ya mere ha na-ere ihe na ngwaahịa. Ọ bụghị ọtụtụ afọ gara aga na General Motors ere ngwaahịa iji kwụọ ụgwọ maka ihe n'okpuru-kwụrụ ụgwọ ezumike nká na ike uru n'usoro ihe omume ndị ọrụ ha. Anyị maara ugbu a otú na-arụ ọrụ mgbe General Motors gbara akwụkwọ odida na nso nso. Ndị stockholders furu efu ego nile. Ugbu e nwere ụfọdụ anoghi n'ulo oba ma US na Britain na mkpa na-ere ngwaahịa iji nweta ego.
Akụrụngwa bụ ezigbo ego ọ bụrụ na ị nwere ego iji wepụta ya mgbe nile, ma nwee ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na i nwere ihe ọzọ $ 500 kwa ọnwa nke ị nwere ike wepụta kwa ọnwa maka afọ iri, ị bụ onye na-etinye ego ogologo oge. Na-etinye ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị nwere ike iji ike na anwansi nke mmasị dị ukwuu.
Otú ọ dị, ahịa ahịa ụbọchị, na-enye ụfọdụ nsogbu. Ahịhịa ndị na-abaghị uru bụ ndị na-enye gị ohere ịmefu ego ngwa ngwa, mana ha bụkwa ndị kasị dị ize ndụ. trading obere ebuka na-abaghị uru na-adị mfe karịa akwara gị, mana ịmepụta ego dị mkpirikpi n'oge dị mkpirikpi adịghị mfe. Jide n'aka na ị nwere ike mepee akaụntụ dị oke. Ụlọ ndị na-agba akwụkwọ ga-enwe obi ụtọ ịbata gị n'ihi na ị ga-azụ ahịa ọzọ, kwụkwuo ụgwọ na ọrụ, ma kwụọ ụgwọ maka mmasị kwa ụbọchị n'ụlọ ezumike.
Ọtụtụ mgbe, ahịa na-agbadata, mgbe ụfọdụ ngwa ngwa, na karịa karịa atụ anya. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa zụrụ ma jide ngwaahịa ruo mgbe ọ na-aga. Mgbe ụfọdụ ọ na-ewe ọtụtụ afọ maka ngwaahịa iji laghachi. Mgbe ahụ, ụfọdụ osisi na-agbada ma ghara ịlaghachi. Ndị Enron, Chrysler na GM ngwaahịa na-akwa ụta mere nchọpụta ahụ. Onye na-amu amu ga-ejide ngwaahịa ruo ọtụtụ afọ wee ree ngwaahịa ahụ agbanweghi; na-ekwu na ha mebiri ọbụna na ngwaahịa. Nke a na-eleghara ego bara uru anya. Ọ bụrụ na eresị ngwaahịa efu na ego etinye ego na ọnọdụ ka mma, ego ahụ ga-eme ọtụtụ ihe karịa ịjụ onye na-eri ya ogologo oge.
Ego nwere ike mgbe ebuka gbadaa ma nke a na-agụnye shorting, a echiche ọbịa ka ọtụtụ ndị ọhụrụ na-azụ ahịa. mgbe a ozu ahia -eche ahịa bụ banyere na-aga ala, ọ na-akanyam na ngwaahịa mbụ, na-enwe olileanya ịgbara ya mgbe e mesịrị n'ụlọ a ala price. Novice ahịa ga di otu ụzọ na-azụ ahịa. Ha na-ezi mgbe tide bụ ọrụ n'aka na-azụ niile ụgbọ mmiri, ma mgbe tide na-apụ, ha na-hapụrụ, beached, na n'elu ájá.
Iji ichikota ebuka, ha bụ oké ma ọ bụrụ na i nwere a otutu ego na-etinye ego ma ọ bụ ego itinye ego karịrị otu oge nke oge, ụfọdụ n'ozuzu azụmahịa ihe ọmụma, na ọṅụ n'ịgụ Wall St. Journal ma ọ bụ IBD. Ha dị ukwuu mgbe ndị ahịa na-trending na one direction. -Emekarị o siri ike iji jiri ihe ọ bụla dị ịrịba ego nke leverage na ebuka, n'ihi ya, ọ na-ewe ihe ego iji mee ka ego.
Forex Trading ígwè ọrụ na-
Olee otú iji Forex Trading
ígwè ọrụ na-